Wararka Maanta: Jimco, Dec 21, 2012-Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo kulmay (SAWIRRO)
Jimco, December 21, 2012(HOL): Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa booqasho ku tegay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, halkaasi oo uu ku tegay casuumaad rasmi ah oo uu ka helay madaxweynaha dalkaas Mwai Kibaki.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa markii uu gaaray caasimadda Kenya waxaa uu la kulmay dhiggiisa dalka Kenya Mwai Kibaki, kaasi oo ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal, gaar ahaan howlgallada ciidmada Kenya ee dalka Soomaaliya iyo weliba dhibaatooyinka ay dadka Soomaaliyeed ku qabaan Magaalada Nairobi, gaar ahaan Xaafadda Islii oo ay Soomaalida ku heystaan ganacsi baaxad leh.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay Madaxweynaha iyo Dowladda Kenya dadaalka ay ka geysteen xasilinta gobolka geeska Afrika, “ Mudane aragtidada fog, geesinimadaada, waayo aragnimada aad leedahay waxey keyd u tahay nabada, xasilnaanta iyo degenaashada Gobolka waxaana ku rajeynayaa guul”ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud.
Waa markii ugu horreysay oo uu madaxweynaha Soomaaliya booqdo dalka Kenya tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynenimada, waxaase xusid mudan in uu horay u booqday dalalka Jabuuti, Uganda iyo Itoobiya oo iyana Soomaaliya ay ciidamo ka joogaan dalka Soomaaliya.
Booqashada Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud ayaa waxay ku soo beegmeysaa iyadoo nabadgelyo darrada ka jirta Magaalada Nairobi, gaar ahaan Islii ay faraha ka baxday, isla markaana ay qaraxyo dhowr ah ka dhaceen, iyadoo mar kasta oo qaraxyo dhacaanna la qabqabto Soomaali badan oo Nairobi ku nool.